ဆရာမင်းသုခ ရဲ့ ဇူလိုင်လ အတွက် တစ်လစာ ဗေဒင် ဟောစာတမ်း - Myannewsmedia
ဆရာမင်းသုခ ရဲ့ ဇူလိုင်လ အတွက် တစ်လစာ ဗေဒင် ဟောစာတမ်း
ဟောစတမ်းအပြင် ယတြာလေးတွေပါလို့ သိမ်းထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။ပုံကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဖတ်ရှု့နိုင်အောင် Like&Shareပေးကြပါ။
2019နှစ်အတွက်မိမိကံကြမ္မာအဆိုးအကောင်းကို ဆရာမင်းသုခထံဖုန်းဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည်။ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပြီးလိုအင်ဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံကြပါစေ ကံဇာတာအညံ့များလည်းပပြောက်ပြီးကံပွင့် စန်းပွင့် မေတ္တာရေး အချစ်ရေးများ အဆင်ပြေကြပါစေ။
ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာဆရာမင်းသုခ ၊၇၃လမ်း/၃၄-၃၅လမ်းကြား၊ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် မန္တလေးမြို့။ Ph-09440243656
ဒီကာလမှာမိမိအတွက်လုပ်စရာအလုပ်အကြွေးတွေများနေတတ်ပါတယ်။အရင်အပတ်ကမပြီးပြတ်သေး တဲ့ကိစ္စတွေဒီကာလမှာအပြီးသတ်လုပ်နေရတတ်ပါတယ်။ဖခင်ရှိသေးသူများ ဖခင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ပါ။ဒီကာလမှာအိုးအိမ်အပြောင်းအလဲမျိုးတွေ ၊အိမ်ပြင်ဆင်တာမျိုးတွေလဲကြုံနေရတတ်ပါတယ်။အားကိုးမရှာပါနဲ့၊မိမိကိုယ်သာအားကိုးပါ။လုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူများကိုမတိုင်ပင်ပါနဲ့ ၊အဖျက်စကားတွေပဲကြားရပါလိမ့်မယ်။ငွေကြေးနဲ့ပက်သက်ပြီးရသလောက်နဲ့ရောင့်ရဲလိုက်ပါ။
အဲလိုသာနေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ရသင့်တာထက်ပိုရပါလိမ့်မယ်။ဒီကာလမှာကိုယ်ခံအားနည်းနေတာမျိုးတွေလဲ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပက်သက်ရင် ခြူခြာလွန်းတဲ့နေ့တွေပါပဲ။ရောဂါခံစားရပြီးလို့ထင်တာနဲ့ဆေးခန်းသာသွားပါ။ဆေးမြီးတိုနဲ့မကုပါနဲ့။အချစ်ရေးမှာတော့ချစ်သူကမိမိကိုနားလည်မှုအပြည့်ရှိမဲ့နေ့ရက်တွေပါပဲ။အိမ်ထောင်ရေးမှာညှိနှိုင်းရခက်နေပါတယ်။နားလည်မှုရဖို့အတော့်ကိုကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ပညာရေးမှာ ဥာဏ်၊၀ီရိယကိုသာ အားကိုးပါ။
အထူးဟောကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပေးပါ။အကျိုးပေးဂဏန်း 6/0/2 ၊ ယတြာ = ဘုန်းကြီးကျောင်း ဘုရားကျောင်းများတွင် သောရေအိုး ရေအိုးစဉ်များ လှူပေးပါ။ မိမိအိမ်ဘုရားတွင် ပန်းအဝါရောင်(21)ပွင့် ကပ်လှူပေးပါ။
မိမိရဲ့စိတ်ကူးတွေကသစ်လွင်နေပါလိမ့်မယ်။အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိတွေးနိုင်ခေါ်နိုင်တာကြောင့်အဆင်ပြေချောမွေ့ မဲ့နေရက်တွေပါပဲ။အစုစပ်ကိစ္စများ၊ငွေပေးငွေယူကိစ္စများ ၊အာမခံခြင်းများလဲဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။အလုပ်နဲ့ပက်သက်ရင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်ကြိုးစားလေအောင်မြင်မှုရလေပါပဲကားဝယ်ခြင်း၊ကားရောင်းခြင်းမျိုးလဲ ဒီအပတ်မှာလုပ်ဆောင်လို့ အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။
ငွေအစုလိုက်ဝင်နိုင်တာကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်ကလာဘ်မပိတ်အောင်နေတတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ကျန်းမာရေးကတော့ကောင်းမွန်ပါတယ်။သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းပြီး စားကောင်းအိပ်ပျော်မဲ့အချိန်ကာလပါပဲ။ လိုချင်တာတွေကို လုပ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အိမ်ထောင်ရေးကတော့ ကြားလူအနှောက်အယှက်ရှိ နေတတ်ပါတယ်။ ကြားစကားတွေကိုချင့်ချိန်ပြီးမှာယုံကြည်စေချင်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကောင်းပါတယ်။ တည်ငြိမ် အေးချမ်းတဲ့ ချစ်သူမျိုးတွေဆုံရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကတော့ဆရာသင်ကြားသမျှနားလည်လွယ်နေတာ ကြောင့် အခက်အခဲမရှိတဲ့အနေအထားပါပဲ။
အကျိုးပေးဂဏန်း 7/1/2အထူးဟော ကံမြင့်မားနေပါတယ်။ယတြာ = ထောပတ်ဖျော်ရည် တစ်ခွက် ဘုရားကပ်လှူလိုက်ပါ။
မိမိရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုကြောင့်အားလုံးကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ထိပ်ဆုံးကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်။ အားကစားအလုပ်များ၊ပြေးပွဲ၊ပြိုင်ပွဲများတွင်ဆုတံဆိပ်တွေရလာပါလိမ့်မယ်။မိမိအနေနဲ့ စူးစမ်းရှာဖွေလေ အကျိုးရှိလေပါပဲ။ရသင့်တဲ့လုပ်အားခထက်ဘောနပ်ဆိုတာမျိုးလဲရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေရှိပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတော်တဲ့သူကို မြှောက်စားခြင်းဖြင့်မိမိအတွက်အကျိုးမယုတ်ပါဘူး၊အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီးအခွင့်အရေးကောင်းတွေလဲရလာတတ်ပါတယ်။
ုကျန်းမာရေးကတော့ မဆိုးပါဘူး။အစားစားချင်စိတ်တော့နည်းနေတတ်ပါတယ်။၀မ်းချုပ်တတ်ပါတယ်။စက်ပစ္စည်းအသစ်ဝယ်မယ်ဆိုဒီအပတ်ထဲခြင်းဖြင့်ရေရှည်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။လူချစ်လူခင်လဲများနေမဲ့နေ့ရက် မျိုးပါပဲ။လက်ရှိအနေအထားအရတော့ အချစ်ရေးကံကအတော်လေး ကောင်းနေပါတယ်။အဆင်မပြေတဲ့ချစ်သူတွေပြန်လည်ပြီးနားလည်မှုယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အိမ်ထောင်ရေးသာယာချမ်းမြေ့ပါလိမ့်မယ်။ပညာရေးအထူးကောင်း မွန်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲ။
အကျိုးပေးဂဏန်း 1/9/3အထူးဟော စန်းပွင့်နေမည်။ယတြာ = စက်ပစ္စည်းအဟောင်းတစ်ခုကို အနောက်အရပ်တွင် စွန့်ပြစ်လိုက်ပါ။ သီလရှင်တွေကို ဆန်လှူပါ။
ဖြစ်ချင်တာထက်ဖြစ်သင့်တာတွေကိုဦးစားပေးလိုက်ပါ။နွားကွဲရင်ကျားဆွဲတယ်ဆိုသလို တစ်ယောက်ထဲချွန်ပြီးဘာမှမလုပ်ပါနဲ့၊အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အပေးအယူမျှမျှလုပ်ကိုင်လိုက်ပါ ။ အဆင်ပြေသွား ပါလိမ့်မယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သားသမီးတွေရှိရင်တော့သားသမီးကြောင့်ပူပန်ရတာ ငွေကုန်ရတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ကြားပွဲစားလုပ်ပေးခြင်းများ ၊အကျိုးဆောင်ပေးခြင်းများလုပ်မိပါကမိမိကစေတနာအဓိကထားလုပ်ရင်တောင်မှအပြစ်ပြောမဲ့သူတွေကရှိနေတတ်ပါတယ်။
ငွေကြေးသုံးစွဲမှုအပိုင်းမှာလက်မလွယ်မိဖို့ အထူးပဲသတိ ထားလိုက်ပါ။မိတ်ဆွေကောင်းရှားပြီးဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေပဲဒီကာလမှာတွေ့နေရတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးကတော့အလွန်ကောင်းပါတယ်။နာမာကျန်းဖြစ်နေသူတောင်မှနေ့လို့ထိုင်လို့ကောင်းပြီးထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့အိမ်ထောင်ဘက်ကခရီးများနေတာကြောင့်ဆုံချိန်နည်းပါးနေတတ်ပါတယ်။အချစ်ရေးမှာချစ်သူရဲ့အထင်လွဲမှုက ကြီးမားလွန်းနေတတ်ပါတယ်။ပညာရေးကတော့မိမိမသိသေးတဲ့ပညာတွေသင်ယူခွင့်သင်ကြားခွင့်တွေရလာပါလိမ့်မယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း 2/3/6အထူးဟော ကံအားနည်းနေချိန်ပါ။ယတြာ = မိဘမဲ့ ကလေးကျောင်းများတွင် လိုအပ်သောပစ္စည်းများကို အဓိကထားပြီး တက်နိုင်သလောက် ကူညီပေးလိုက်ပါ။
ယုံကြည်ရာကို စွဲမြဲစွာလုပ်ပါ။လုပ်ချင်တာတွေအတွက်အခက်အခဲတွေကိုအရင်ဆုံးရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ မိမိလုပ်ချင်တာတွေကိုသံဓိဌာန်ချပြီး ဒီကာလမှာစတင်လုပ်သွားကြည့်ပါ၊သချာပေါက်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ဘာသာရေးသမားများ၊အဓိဋ္ဌာန်ဝင်လိုသူများ ဒီကာလမှာသေချာပရိကံလုပ်ပြီးစတင်ဆောင်ရွက်ပါ။ ပေါက်မြောက်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။သူများပြောတာလုပ်လေအမှားများလေပါပဲ။မိမိကိုယ်တိုင်ချင့်ချိန်ပြီးလုပ်သင့်တာကိုလုပ်သွားလိုက်ပါ။စီးပွားရေးသမားများ အကြပ်အတည်းကာလပါပဲ။သည်းခံပြီးကျော်ဖြတ်နိုင်ပါမှ အောာင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။လိုချင်တာတွေကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ယူရပါလိမ့်မယ်။
မကောင်းတဲ့သူတွေကိုပေါင်းသင်းတာမျိုးဒီနေ့မှာရှောင်စေချင်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့မကောင်းမှုတွေကြားကိုယ်ပါပြီး ရုံရောက်ဂတ်ရောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးကတော့ ချင့်ချိန်ပါ။၀မ်းဗိုက်နဲ့ပက်သက်တဲ့ရောဂါမျိုးရတတ်ပါတယ်။အိမ်ထောင်ရေးမှာ အဆင်ပြေတာများပါတယ်။အချစ်ရေးလဲအကောင်းကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ ”သင့်”တဲ့ အချိန်တွေပါပဲ။ပညာရေးကတော့ကောင်းတယ်ဗျာ ။တစ်ဦးတစ်ယောက်ဆရာတင်ပြီး ပညာစယူလိုက်ပါ။
အကျိုးပေးဂဏန်း 4/8/5 အထူးဟောလူလိမ်ခံရတတ်ပါတယ်။ယတြာ = ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများကို မိမိတက်နိုင်သလောက် လိုအပ်သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို လှူပေးပါ။အိမ်ဘုရားမှာ ထောပတ်ဆီမီးခွက်(3)ခွက် ထွန်းညှိ့ပူဇော်ပေးပါ။
စိတ်ကူးယဉ်တာလေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်တာမျိုးကို မလုပ်ပါနဲ့။လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ သေချာပေါက်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးသမားများ အားထည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကြိုးစားသလောက် အကျိုးအမြတ်တွေလဲကြီးပါလိမ့်မယ်။ကုန်သွယ်မှုအလုပ်များ၊ရပ်ဝေးမှာတည်ထောင်ထားတဲ့အလုပ်များ သေချာ ပေါက်အကျိုးအမြတ်ကြီးပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့ရောင်းချခြင်းမျိုးလဲကောင်းမွန်နေပါလိမ့်မယ်။မိမိအိမ် ၊မိမိလုပ်ငန်းအတွက်ပရိဘောဂပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းတွေလဲ အထူးကောင်းတဲ့ကာလပါပဲ။
စကားချိုသာစွာပြော ခြင်း၊ကတိသစ္စာတည်ခြင်းများကြောင့်လူအများရဲ့ယုံကြည်လေးစားမှုကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကိုယ်ခံအားအလွန်ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။တော်ရုံနဲ့ရောဂါဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အချစ်ရေးကံကတော့အလွန်ပဲကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ ချစ်သူသစ်ရည်းစားသစ်ဆိုတာမျိုးလဲ ရလွယ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ပက်သက်ပြီးစကားများရတတ်ပါတယ်။ပညာရေးကတော့အားထည့်ထားနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးးပါပဲ။
အကျိုးပေးဂဏန်း 5/4/6အထူးဟော စီးပွားကောင်းမည်။ယတြာ = မိမိအိမ်ဘုရားတွင် အုန်းညွန့်(5)ညွန့် ပန်း(7)ပွင့် အောင်သပြေ (9)ညွန့် ကပ်လှူပေးပါ။
စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွင်ရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေကိုမေ့ထားနိုင်မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ မိမိသူတစ်ပါးအကျိုးယုတ်မဲ့ကိစ္စတွေကို ရှောင်စေချင်ပါတယ်။မိမိလုပ်ချင်တာတွေကိုအချိန်ပေးပြီးလုပ်ရပါလိမ့် မယ်။အခက်အခဲတွေကြုံပြီးမှ အောင်မြင်မှုတွေရတတ်ပါတယ်။အလုပ်များနေတာကြောင့် အိမ်မကပ်နိုင်ဖြစ်ရ တတ်ပါတယ်။အလုပ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ခရီးမျိုးတွေလဲသွားခွင့်ကြုံမှာပါ။လူမျိုးခြားဘာသာခြားတွေနဲ့ဆက်စပ် လုပ်ကိုင်ခြင်းများ အမှားမရှိအောင်လုပ်ကိုင်လိုက်ပါ။
ရွှေဝယ်ခြင်း၊ရွှေရောင်းခြင်းမျိုးလဲ ဒီကာလမှာရှောင်လိုက်ပါ။ကျန်းမာရေးကတော့လိုတာထက်ပိုဂရုစိုက်လိုက်ပါ။အဆိုးကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ ဖြစ်နေကျရောဂါလေးတွေပြန်ဖြစ်ရ တတ်ပါတယ်။အိမ်ထောင်ရေးမှာ သွေးထိုးမှုတွေကြောင့်အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ငွေကြေး လက်လွန်မိရင်တော့ ဆုံးတတ်ပါတယ်။အချစ်ရေးကံကတော့ကောင်းမွန်အဆင်ပြေနေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ပညာရေးမှာကြိုးစားသလောက်ထွန်းပေါက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီကာလအတွင်း တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအထူးကံကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ကြံစည်သမျှ အောင်မြင်မဲ့ အချိန်ပါ။ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်း ၊ခရီးသွားလုပ်ငန်း ၊ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေအထူးကောင်းကျိုးပေးချိန်ပါ။အနာဂတ် စီမံကိန်းချထားတဲ့ကိစ္စများ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မဲ့အချိန်ပါပဲ။လူငယ်တွေ အချစ်ရေးကံကောင်းနေပါတယ်။
စန်းလဲပွင့်နေပါတယ်။အလုပ်အကိုင်တွေလဲအရှိန်အဟုန်တွေနဲ့တိုးတတ်နေပါတယ်။အထက်လူကြီးရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံရတတ်ပါတယ်။ရာထူးတိုးခြင်း၊နေရာကောင်းရခြင်းအလုပ်ရှာနေသူများအလုပ်သစ်ရခြင်းမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးကတော့ သွေးတိုးနိုင်တာကြောင့်တတ်စာတွေလျှော့စားပါ။ပညာရေးအကောင်းဆုံးအချိန်ပါ။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၂/၆/၁ ၊ အထူးဟော ကောင်းသောကံများဖြစ်ထွန်းနေမည်။ယတြာ = အနီရောင်များများပါသော အဝတ်အစားများအားပြုဝတ်ဆင်ပါ/ပန်းပေါင်းစုံ ၅မျိုး ဘုရားလှူပေးပါ။
???? ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာမေးမြန်းလိုသူများအတွက် ????
???? နာမည်မွေးသက္ကရာဇ် အပြည့်စုံပို့ပေးရပါမည်????အချစ်ရေးမိမိချစ်သူနာမည်မွေးသက္ကရာဇ်ပေးရပါမည်????-စီးပွားရေး သိလိုပါကလက်ရှိအလုပ်အကိုင်နှင့် တခြားစီးပွားရေး စဉ်းစားထားတာရှိလျှင်စသည်ဖြင့် လိုအပ်တာများနှင့်မက်ဆေ့ကနေ ပေးပို့မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။????ဥာဏ်ပူဇော်ခ MPTဘေ၃ထောင်ပို့ပေးရပါမည်။ ????မန္တလေးမြို့ကမိတ်ဆွေများ ဆရာ့ဟောခန်း၌ လာရောက်မေးမြန်းလိုသူများ ကြိုပြီးဖုန်းဆက်ပေးရန်ပြောကြားလိုပါသည်။
???? အောက်ပါ ထိမိသော ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင် /ယတြာ အစီအမံများအာမခံဖြင့် ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်????
????ချစ်သူ/ခင်ပွန်းမှ မိမိအပေါ်တွင်ချစ်ခင် ကြင်နာ စေရန်????အိမ်မှထွက်သွားသူ ပြန်လာစေရန်????ဖောက်ပြန်သောချစ်သူ /အိမ်ထောင်ဘက်ခြေငြိမ်စေရန်????မိမိစိတ်ဝင်စားသူကမိမိအပေါ်ကို မေတ္တာသက်ဝင် ချစ်ခင်လာစေရန် ????????????????သွေးအေးနေတဲ့ချစ်သူကမိမိအပေါ် ပြန်လည်နွေးထွေး ချစ်ခင်လာစေရန် ????????????
???? အိမ်ခြံမြေ၊ကား၊အစရှိသောပစ္စည်းများ မိမိကြိုက်ဈေးဖြင့် အမြန်အရောင်းထွက်ရန် ယတြာ/ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်???? လုပ်ငန်းခွင်တွင် ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက် နှောက်ယှက်မူများ ကင်းရှင်းစေရန်☑ လက်ရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းယခင်ထက်ပိုမိုအောင်မြင်ရန်???? မိဘဆိုဆုံးမမူနားမဝင်ဘဲ စိတ်လေနေသော သားသမီးများ လိမ္မာလာစေရန်????‍⚕️ ကျန်းမာရေး မကောင်းသူများ ပြန်လည် ကျန်းမာရန်???? တောင်းခံရခက်သော ငွေကြေးများ ပြန်လည်ရရှိရန်????ဌာနဆိုင်ရာ ရာထူးတိုးခြင်း၊မိမိပြောင်းရွေ့လိုသောနေရာရရှိစေရန်
???? အမူ ကိစ္စ များ မိမိဘက်မှအနိုင်ရ၍ ပြီးပြတ်စေရန် အစရှိသော စီးပွားရေးလူမှုရေး အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေးများကိုဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်ယတြာများဖြင့်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။????ဆရာ့ဟောခန်း၌လာရောက်ဆွေးနွေးလိုသူများ ကြိုပြီးဖုန်းဆက်ပေးရန်ပြောကြားလိုပါသည်။☸️ယတြာလုပ်မည့်သူများ viberသို့ မွေးခုနှစ် နေ့နံ နာမည်အရင်း အကြောင်းရာပေးပို့ရပါမည်။
Previous post မင်္ဂလာဆောင်ရင် လက်ဖွဲ့ငွေတွေ အများကြီး လိုချင်တယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့ အေးမြတ်သူ
Next post သက်ငယ်မုဒိန်းသမားတွေကို ချီးကျွေးရင်စားမှာလားလို့ မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်